Broadcast Pix သည် MTE2019 တွင် Cloud အခြေပြုတိုက်ရိုက်ထုတ်လုပ်မှုကိုပြောဆိုသည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » ထုတ်လွှင့် Pix ဆွေးနွေးပွဲ MTE2019 မှာ cloud-based တိုက်ရိုက်ထုတ်လုပ်မှု
Chelmsford, Mass - ။ စက်တင်ဘာ 18, 2019 - အသံလွှင့် Pix ™ယင်း၏ဘက်ပေါင်းစုံထုတ်လုပ်မှုဖြေရှင်းချက်တခုအဖြစ်နှင့်မီဒီယာနည်းပညာကုန်စည်ပြပွဲအတွင်းမှာလာမယ့်သီတင်းပတ်အတွင်း cloud-based တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှထုတ်လုပ်မှုအပေါ်အခမဲ့ပညာရေးအစည်းအဝေးများဦးဆောင်လမ်းပြပါလိမ့်မယ်။ အဆင့်မြင့်အသံလွှင့် Solutions ကထုတ်လုပ်တစ်ဦးကအခမဲ့အဖြစ်အပျက်, Key ကို Code ကိုမီဒီယာတစ်ခုဌာနခွဲ, MTE2019 စက်တင်ဘာ 24 အပေါ် Seattle တှငျ Fremont စတူဒီယိုမှာစတင်များနှင့်လက်ပံ, Ore အတွက် Leftbank နောက်ဆက်တွဲဖို့လှုံ့ဆော်ပေး။ စက်တင်ဘာ 26 ပေါ်မှာ။
ပြပွဲနှစ်ခုစလုံးရက်ပေါင်းတွင်, အသံလွှင့် Pix ထံမှ Chuck Williamson အများပြည်သူအင်တာနက်ကိုအသုံးပြုပြီးတတ်နိုင်သမျှဝေးလံခေါင်သီ-based ဘဏ်ဍာဖန်ဆင်းသောထိန်းချုပ်မှု-over-IP ကိုအတွက်မကြာသေးမီတိုးတက်လာစူးစမ်းလေ့လာပါလိမ့်မယ်။ ထုတ်လွှင့် Pix တပ်မှူး™ကင်မရာကိုထိန်းချုပ်မှုများနှင့် switching ကနေဂရပ်ဖစ်များနှင့် streaming များမှတစ်ဦးတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှထုတ်လုပ်မှု၏အားလုံးရှုထောင့်၏ touchscreen ကထိန်းချုပ်မှုအားဖွင့်, ဘုံကို web browser များအတွင်းတွင်ပြေး။ အသံလွှင့် Pix ရဲ့ထူးခြားတဲ့မီဒီယာသတိထားဘာလို့လဲဆိုတော့ Micro စနစ်နဲ့အခြားသောနှင့်အတူ coupled, မျိုးစုံလုပ်ဆောင်ချက်များကိုနှင့်မီဒီယာ element တွေကိုသိသိသာသာ UI ကို simplifying, တဦးတည်းခလုတ်ကိုကနေအတူတူအသိုက်နဲ့ထိန်းချုပ်နိုင်ပါတယ်။
2002 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး, အသံလွှင့် Pix လှပသောဘက်ပေါင်းစုံနှင့်အသုံးပြုရလွယ်ကူကြီးမြတ်အစီအစဉ်များ, အောင်လိုအပ်သောပြည့်စုံ toolset ပေးထားပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဘက်ပေါင်းစုံထုတ်လုပ်မှုဖြေရှင်းချက်မူပိုင်ခွင့်ထိန်းချုပ်မှုနှင့်အလိုအလျောက်နည်းပညာများ feature ပေါင်းကုန်ကျစရိတ်ထိရောက်သော, လုံခြုံသောမိုဃ်းတိမ်ကို backup လုပ်ထားဘို့ဝန်ဆောင်မှုများ, ထိန်းချုပ်မှုများနှင့် ပူးပေါင်း. ထောက်ပံ့ပေးသော BPNet ဂေဟစနစ်။ ထုတ်လွှင့် Pix 5,000 နိုင်ငံများထက် ပို. အတွက် 100 အစိုးရ, ထုတ်လွှင့်, တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှဖြစ်ရပ်နှင့်အမြင်အာရုံရေဒီယိုဖောက်သည်ထက်ပိုရှိသည်ဖို့ဂုဏ်ယူသည်။ မှာပိုမိုလေ့လာသင်ယူ broadcastpix.com.
ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့် Pix ထိန်းချုပ်မှု-over-IP ကို ဂရေဟမ်ချပ်မန်း Prmoted toEditor MTE2019 ထုတ်လုပ်မှု switcher လှံ & Arrows TVU ကွန်ယက် ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် ဗီဒီယိုကိုခလုတ် 2019-09-18
ယခင်: အပိုင်းအချိန်စစ်ဆင်ရေးလက်ထောက် / ကုန်ပစ္စည်း Loader ကို / E-commerce ရောင်းရန်ငှားရမ်း
နောက်တစ်ခု: အလုပ်ရှာဖွေရေးအောင်မြင်မှုကိုချီးမြှင့်နှင့်အတူအသံ Editor ကို / အသံဒီဇိုင်နာ Cece ခန်းမကြီးကြပ်ရိုသေစွာမှ Motion Picture အသံအယ်ဒီတာများ (MPSE)